Nanamafy i Tabera Randriamanantsoa : « Efa lafo namidy ny « Villa Elisabeth », an’ny Pr Zafy » | NewsMada
Nanamafy i Tabera Randriamanantsoa : « Efa lafo namidy ny « Villa Elisabeth », an’ny Pr Zafy »
Tsy honohono intsony. Nomahafisin’ny mpiara-dia amin’ny Pr Zafy, amin’ny alalan’i Tabera Randriamanantsoa, omaly, fa tsy afaka mampiasa ny « Villa Elisabeth » intsony ny fianakavian’ity « Rain’ny demokrasia » ity.
Tamin’alahelo tanteraka. « Efa lafo tanteraka io trano sy tanàna io ary hanamboarana trano eo. Nanomboka ny fiandohan’ity taona ity izany namarotana azy izany… Mampalahelo fa fananam-panjakana io fa tsy an’ny Pr Zafy. An’ny vahoaka… Amidy daholo izany ny trano sy tanim-panjakana eto. Tsy misy mangarahara sy filazana izany amin’ny vahoaka…”, hoy i Tabera Randriamanantsoa, omaly. Notsiahiviny fa efa vita avokoa tamin’izany fotoana izany ny fifanarahana sy ny fivarotana io tany sy tanàna io. Na izany aza, nambarany fa mbola misitraka ny zony amin’ny maha vadin’ny filoha teo aloha azy ny vadiny, Zafy Therése Zafimahova.
Araka izany, andrasana ny mangarahara momba ity tany sy tranon’ny filoha teo aloha ity. Iza amin’ireo mpitondra sy mpitantana amin’izao fotoana izao ireo ny nivarotra sy nanao ny fifanarahana rehetra amin’io tompony vaovao io ? An’ny fanjakana rahateo io tanana sy trano io. Ka raha hamidy tahaka izao avokoa, tsy misy mangarahara sy fanazavana ny fananan’ny fanjakana, tsy hanana na inona na inona intsony izany isika, atsy ho atsy ? Nahoana koa anefa no hamidy ?
Misitraka ny zo feno ireo filoha teo aloha…
Tsiahivina fa manana zo hanana mpitandro filaminana 12 hiaro azy sy ny toeram-ponenany ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana teo aloha. Eo ihany koa ny zo hanana pasipaoro diplomatika, fiara miisa 2 isaky ny 7 taona miampy solika 250 litatra isam-bolana. Mitsahatra kosa ireo tombontsoa ireo, raha mbola lasa filoham-pirenena indray ary aorian’ny fahataperan’ny fe-potoam-piasana vao mihatra. Ny vadiny no misitraka ireo tombontsoa voafaritra raha maty ny filoha teo aloha. Mifindra amin’ny zanany tsy ampy taona izany raha sanatria ka maty indray koa io.